उत्तम काप्री आइतबार, कात्तिक २, २०७७, १०:३९
काठमाडौं–तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात) ले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) को कम्पनी छनोट प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको छ। हायातले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि साउन ३ गते ७ दिने समयसीमा राखेर टेन्डर गरेको थियो।
टेन्डर सूचनामा ७ वटा नेपाली तथा विदेशी कम्पनीले आवदेदन दिए पनि ३ महिना हुन लाग्दा पनि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
होटल व्यवस्थापनले कोरोनाका कारण होटल बन्द भएको भन्दै सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।
हायात होटल व्यवस्थापनले साउन ३ गते शनिबार ७ दिने सूचना प्रकाशन गर्दै डिडिएका लागि आवदेन मागेको थियो। आवेदन माग भएपछि सात वटा नेपाली तथा विदेशी फर्मले इच्छा प्रकट गर्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, ३ महिना हुनै लाग्दा पनि तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले बोर्ड बैठक बोलाएको छैन। जसका कारण सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्ने कम्पनी छनोटको निर्णय हुन सकेको छैन।
होटल हायातको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न ७ कम्पनीको चासोआइतबार, साउन ३२, २०७७
कोरोनाका कारण तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको कार्यालय बन्द भएका कारण बैठक बस्ने ढिलो भएको होटल व्यवस्थापनको भनाइ छ। लिमिटेडको असार ३१ गते बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले डिडिएका लागि होटल व्यवस्थापनले अघि बढाएका सबै प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो। सोही आधारमा होटल व्यवस्थापनले पहिलो पटक हुने लागेको डिडिएका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
डिडिएका लागि पुनः नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न तारागाउँ रिजेन्सी होटल सहमत बुधबार, असार ३१, २०७७
त्यसभन्दा पहिले होटल व्यवस्थापनले एकलौटी रुपमा गर्न लागको डिडिए प्रक्रिया भने रद्द भएको थियो। झन्डै २८ वर्षपछि पहिलो पटक डिडिए गर्न होटल व्यवस्थापन सहमत भएको थियो।
कसरी सुरु भएको थियो डिडिए प्रक्रिया?
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको फेब्रुअरी १९ मा बसेको बोर्डबाट पहिलो पटक सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। डिडिएका लागि भने तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले २०१९ डिसेम्बर ९ मा बसेको रिजेन्सीको बोर्ड बैठकमा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याकंन हुनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) राखेका थिए।
सोही आधारमा लिमिटेडले २०७६ फागुन १८ गते डिडिएका लागि काठमाडौं पोस्टको पाँचौ पृष्ठमा कुन कम्पनी र के–को डिडिए गर्ने हो भन्ने केही नखुलाई एउटा ईमेल आइडी मात्र राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यसरी सबै विवरण लुकाएर सूचना प्रकाशित गर्नुको उद्देश्य आफूअनुकुल कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परोस् भन्ने कुत्सित नियत राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
रिजेन्सीले सूचना प्रकाशन गरेपछि तारागाउँ विकास समितिले डिडिएका लागि प्रकाशन भएको सूचनाका विषयमा फागुन २२ मा ध्यानाकर्षण पत्र पठायो। पत्रमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मन्त्रालय, सचिव तथा संसदीय समितिलाई समेत बोधार्थ दिइएको थियो।
समितिले ध्यानाकर्षण पत्रमा के–का लागि र कुन संस्थाको डिडिए गर्ने र कुन विधि अपनाइने भन्नेजस्ता सामान्य जानकारीसमेत समावेश नगरी सूचना प्रकाशन भएकोमा अहसमति जनाएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट डिडिए गर्न इच्छुक कन्सल्टेन्टहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न राष्ट्रिय दैनिक अंग्रेजी तथा नेपाली पत्रिकामा दुवै भाषामा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा रिजेन्सीले सोसमेत गरेको थिएन।
डिडिए गर्न सर्वसुलभ ढंगले सर्वसाधारणको नजरमा पर्ने पृष्ठमा प्रकाशित गर्न भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, व्यवस्थापनले उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिएन। र, अर्को सूचना पनि प्रकाशन गरेको थिएन।
ध्यानाकर्षण पत्रको बेवास्ता गरेपछि पुनः विकास समितिको चैत ३ गते बसेको बैठकले डिडिए गर्न काम कुन चरणमा पुगेको र के भइरहेको छ भनेर फेरि सोधेको थियो। तर, उक्त पत्रको पनि व्यवस्थापनले कुनै जवाफ नदिई एकलौटी बहुमतबाट पेल्ने गरी असार ३१ गते बोर्ड बैठक बोलायो। तर, बोर्ड बैठकमा विरोध भए पनि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट डिडिएको काम थालनी गर्न होटल व्यवस्थापन सहमत भएको हो। सोही अनुसार साउन ३ गते ७ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशन भएको छ।
सरकारले तारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने उल्लेख छ। सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्नु नपर्ने र भाडाबापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षका लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा लगिएको थियो। सोही आधारमा तारागाउँ विकास समिति, राधेश्याम सर्राफ समूह र आईसिटिसी ग्रुपबीच तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि संयुक्त लगानीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
२०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत उक्त १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत कम्पनीका नाममा लगिएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि तारागाउँ विकास समितिले उक्त जग्गा समितिकै नाममा ल्याउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद् लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
सम्झौता गर्दा सरकारका नाममा रहेको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर अहिले घटेर ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ। उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
तारागाउँ जग्गा विवाद : सर्वोच्चको फैसलामा भोगाधिकारको गोल चक्कर
उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : यसरी बन्दैछ सहमतिको खाका, को पछि हट्ला?
६ चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई साढे २ अर्ब घाटा, व्यवस्थापनमा किन आनाकानी?
निगमको व्यापार खोसेर हिमालयलाई दिइएको 'सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ'बारे लेखाको चासो
उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : ६४ पदका लागि १२३ व्यवसायी मैदानमा, २ निर्विरोध, गोल्छा स्वतः अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आजदेखि सुरु हुने ५४ औं साधारण सभा (नेतृत्व चयन समेतको महाधिवेसन) मा ६४ पदमा लागि हुने निर्वाचनमा १ सय... बिहीबार, मंसिर ११, २०७७